Qiimeynta: 4.9. Tirada ururada: 407
Fiidiyowga xisaabinta ilkaha
Dalbo xisaabinta ilkaha
Rugta caafimaadka ilkaha iyo daryeelka ilkaha ayaa laga furayaa meel kasta. Mid kasta oo ka mid ahi wuxuu leeyahay liis gaar ah oo macaamiil ah oo doorbidaya hay'ad gaar ah iyada oo ku xidhan goobta shaqada, degenaanshaha, iyo adeegyada kala duwan ee la bixiyo, siyaasadda qiimeynta iyo arrimo kale oo badan. Xisaabinta macaamiisha ee dhakhtarka ilkaha waa hawl aad u culus oo waqti badan qaadata. Waa lagama maarmaan maahan oo keliya in la hayo oo la cusbooneysiiyo macluumaadka xiriirka waqtigeeda, laakiin si loola socdo taariikhda caafimaad ee macaamiil kasta, iyo sidoo kale in la keydiyo dukumiintiyo badan oo ah warbixin khasab ah iyo mid gudaha ah. Sida ilkaha u korayo, oo ay weheliso habka wax soo saarka ee ilkaha, xisaabinta macaamiisha xarunta ilkaha ayaa sidoo kale soo hagaagaya. Nasiib wanaagse, horumarka tikniyoolajiyadda iyo suuqa adeegga caafimaadka marwalba way is barbar socdaan. Dhakhaatiirta ilkaha ayaa hada awoodi kara inay iska ilaawaan baahida loo qabo in waqti badan la qaato maalin kasta buuxinta foomamka iyo dukumiintiyada kala duwan, iyadoo gacanta lagu haayo kaararka macaamiisha iyo taariikhdooda caafimaad. Hadda nidaamyada xisaabinta otomaatiga ah ee maareynta ilkaha ayaa iyaga u samayn kara iyaga. Ilaa hadda, dalabka USU-Soft ee xisaabinta ilkaha ayaa isku caddeeyay habka ugu fiican. Waxay si dhakhso leh ugu guuleysanaysaa suuqa dalal badan. Faa'iidada ugu weyn ee codsiga xisaabinta ilkaha marka la barbardhigo analogues waa tayadeeda sare, kalsoonida iyo sahlanaanta isticmaalka.
Maamulayaasha iyo kaaliyayaasha waxaa badanaa lasiiyaa hadba inta saacadood ee ay shaqeeyaan - saacadaha ama shaqada. Nidaamka xisaabaadka ilkaha ee USU-Soft wuxuu leeyahay waqti iyo xaadiritaan taasoo u ogolaaneysa maareeyaha ilkaha inuu la socdo goorta shaqaaluhu shaqada yimaadaan iyo markay shaqada ka tagayaan. Si aad u awood siiso waqtiga, la xiriir kooxdayada taageerada farsamada. Markaad sidan sameyso, waa inaad isla markiiba go'aansato haddii aad rabto inaad ku darto waqti iyo xaadiritaan oo ay weheliso ilaalinta waqtiga. Nidaamka USU-Soft ee xisaabinta ilkaha ayaa kuu ogolaanaya inaad qiimeyso noocyada kala duwan ee shaqooyinka ay shaqaaluhu siyaabo kala duwan u qabtaan. Haysashada diiwaankaaga bukaan-socodka elektaroonig ahaan waxay xaqiijineysaa in macluumaadka ku saabsan daaweynta macaamilka, oo gebi ahaanba lagu soo ururiyey hal meel, aan lagu lumin meel kasta, iyo dhibaatada far-qorista aan la aqbali karin ee dhakhaatiirta ilkaha si buuxda loo xalliyey. Dhakhtarka ilkaha ee macaamiisha, iyo sidoo kale dhakhtarka guud ee dhakhtarka ilkaha, oo marin u leh kaararka oo dhan, ayaa had iyo jeer awoodi doona inuu si dhakhso leh u helo macluumaadka ay xiiseynayaan.
Hayso buugga dawaynta macmiilka. Daaweynta bukaanka ka dib, dhakhtarku wuxuu ku qorayaa diiwaanka taariikhda bukaan-socodka si uu u galo macluumaadka ku saabsan ballanta hore. Dhakhtarku wuxuu ubaahanyahay inuu cadeeyo ilkaha uu lashaqeeyay uuna buuxiyo meelaha 'Diagnosis', 'Complaints', 'Anamnesis', 'Objective', 'Treatment', 'Recommendations' (hadii loo baahdo, waxaad ku dari kartaa goobo kale ama tirtir kuwa aan loo baahnayn). Taariikhda kiiska waxaa buuxin kara oo keliya dhakhtarka ilkaha, laakiin sidoo kale shaqaale kasta oo la siiyay fursad uu ku saxo diiwaanada bukaan socodka ee shaqaalaha kale. Ugu talagal ahaan, dhakhtar aan helin xuquuqdan marin u helida wuxuu abuuri karaa oo keli ah tafatiri karaa taariikhda kiisaska bukaankiisa / keeda.
Wicitaanka bukaanka waa qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqada maamulka. Waxaad qori kartaa farriin qoraal ah oo ku saabsan macluumaad ku saabsan ballanta nidaamka xisaabinta ilkaha oo aad u diri kartaa koox dad ah, ka dibna u wac bukaanada aan helin fariinta. Tani waa waxtar marka aadan haysan waqti aad ku wacdo ama dhakhtarka ilkaha uu bukaanku aad u tiro badan yahay. Dhagsii badhanka 'Send SMS' ee kor ku xusan liiska bukaanada ka dibna daaqad pop-up ah ayaa u muuqata liis buuxa oo fariimo ah oo sugaya in la soo diro. Waxaad arki kartaa bukaanada fariimahooda la gaarsiiyay, sidoo kale waad qarin kartaa si aad u aragto kuwa aan fariimaha loo gudbin. Haddii bukaanku uusan xaqiijin ballanta, waxaad dib u dhigan kartaa ama waad ka noqon kartaa ballanta si toos ah barnaamijka xisaabaadka ilkaha. Si dhakhso leh loo helo kaararka bukaanka loona qoondeeyo xafiisyada dhakhaatiirta, astaamaha dalabka xisaabintu waa caawimaad weyn. Midig-u-riix maalinta la rabo jadwalka oo xulo 'Daabac dhammaan liistada ballamaha taariikhda'. Kala soocida xarfaha ayaa loo adeegsadaa in si dhakhso leh looga helo kaararka ku jira feylka waraaqda magac ahaan; kala soocida kuraasta dhakhtarka ilkaha ayaa loo isticmaalaa in lagu qaybiyo kaararka xafiisyada, si bukaan socodka balantiisa loo qorsheeyey waqtiga ugu horeeya uu ugu sarreeyo waraaqaha.
Haddii aadan ku kaydin kaararka warqadda qaab xarfaha isugu xiga, waxaad u baahan tahay inaad beddesho xulashada daabacaadda ee liiska ballanta maalintaas. Si tan loo sameeyo, shaqaale leh doorka 'Agaasime' ama shaqaale kale oo rukhsad u haysta inay beddelaan dukumintiyada dukumiintiga waa inuu aadaa 'Dejinta', 'Dukumiintiyada dukumiintiyada', raadi 'Ballamada: Bukaannada dhakhaatiirta oo dhan maalinta' oo beddelo kala-soocidda magac ahaan si loogu kala sooco lambarka diiwaanka caafimaadka ama ballanta ugu dambeysa.
Faa'iidooyinka nidaamka USU-Soft ee xisaabtanka ilkaha ayaa naftooda ka hadlaya. Xawaaraha shaqada ee dhakhtarkaaga ilkaha waxaa hubaal ah in si weyn loo dardargelinayo, iyo sidoo kale saxnaanta shaqada iyo xiriirka tooska ah ee macaamiisha. Si kastaba ha noqotee, tani maahan dhammaantood. Ka dib markaad bilowdo adeegsiga nidaamka xisaabinta ilkaha, waxaad hubtaa inaad heshay natiijooyin degdeg ah. Si kastaba ha noqotee, wakhti kadib intaas kadib waxaad dareemi kartaa inaad nagu kalsoon tahay oo kugu filan si aan u helno shaqooyin dheeri ah oo ka dhigi kara dhakhtarkaaga ilkaha xitaa ka sii wanaagsan! Si loo hubiyo in si kaamil ah u shaqeyso barnaamijka xisaabintaada, waxaad u baahan tahay koox barnaamijyo gaar ah leh oo diyaar u noqon doona inay kaa caawiyaan inaad xisaabintaada tahay markii aad u baahato. Sidii aan horeyba u sheegnay, xisaabinta waxaa la siin doonaa fiiro gaar ah iyadoo loo mahadcelinayo barnaamijkeena xisaabinta!